Geo-Engineering & TwinGeo Magazine - Nke Abụọ - Geofumadas
Anyị na-ebi oge na-atọ ụtọ nke mgbanwe dijitalụ. Na ọzụzụ ọ bụla, mgbanwe ndị ahụ na-agabiga ịhapụ akwụkwọ dị mfe na usoro dị mfe na ịchọ arụmọrụ na nsonaazụ kacha mma. Ngalaba na-ewu ụlọ bụ ihe atụ na-atọ ụtọ na, na-ebugharị site na mkpali ndị ga-eme n'ọdịnihu dị ka andntanetị nke Ihe na obodo dijitalụ, na-achọ ịmaliteghachi onwe ya dịka ụzọ ntozu BIM na-enye ya ohere.
Nhazi nke BIM na ọkwa nke 3 jikọtara na echiche nke Digital Twins, na ọ naghị esiri ụlọ ọrụ dị ka Microsoft ike inweta ọnọdụ bara uru n'ahịa nke yiri ka ọ bụ naanị maka ndị injinia na ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ. N'okwu m, esiri m n'ọgbọ hụrụ CAD ka ọ bịara dị ka ihe ngwọta nke eserese nke ọma yana na ọ na-esiri m ike ịnwe ihe ngosi 3D n'ihi na mbido aka m yiri ka ọ mara mma karịa nsụgharị na-agwụ ike. Ọ bụ ezie na anyị kwenyere na ihe anyị na-eme ugbu a na Structural Robot, AecoSIM ma ọ bụ Synchro bụ nke kachasị mma, na-eleghachi anya na 25 afọ gara aga ọ dịghị ihe ọzọ karịa ime ka m kwenye na anyị nọ n'otu oge ntụgharị maka njikwa ihe jikọrọ ọnụ.
... na usoro injinia.
Naanị ugbu a na ụkpụrụ Gemini yiri ka ọ na-adọta ụzọ ọzọ na usoro nke usoro ọmụmụ BIM, na-atụgharị echiche ochie nke akpọrọ Digital Twins nke nnukwu ụlọ ọrụ dị na ụlọ ọrụ ahụ na-aga na ntughari ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke anọ; na ebum n’obi ị gaa n’ihu n’usoro nke mgbanwe nke ihe ọmụmụ injinia, dịka akụkọ mkpuchi, anyị ekpebiela BIM na nchepụta ya na ịdị mkpa ya.
Anyị na-agbakwunye mbipụta ahụ na ihe atụ nke ihe ọhụụ na ụdịdị Geo-engineering site na ngwanrọ na ndị na-enye ọrụ. Ihe ọmụmụ na isiokwu ndị a na-apụta:
Nlekọta akụrụngwa nke ọgụgụ isi, ogige sayensị nke Hong Kong na-etinye echiche Digital Twins.
Nnyocha onwe nke okporo ụzọ na ihe mgbochi akụrụngwa na-eji Drone Harmony.
Christine Byrn na-agwa anyị banyere Digitally Advanced City na usoro nke ozi a pụrụ ịdabere na ya mgbe yana ebe ọ dị mkpa.
LandViewer, ya na ọrụ ya maka ịchọpụta mgbanwe sitere na ihe nchọgharị ahụ.
Banyere ajụjụ ọnụ, akwụkwọ akụkọ ahụ gụnyere mmekọrịta nke ndị mepụtara Synchro, UAVOS na nke mbụ José Luis del Moral na ọrụ ya Prometheus nke ọgụgụ isi emebere na usoro iwu.
... na GEO obibia.
N'aka nke ọzọ, ịhụ ya ka ọ na-esite na atụmatụ nyocha ya, yana iche echiche banyere ịlụso ihe ịma aka nke ijikọ ụkpụrụ LADM na InfraXML anya karịrị afọ ojuju. Izizi agbabuela dị ka otu njikọ dị n'etiti ngalaba nkeonwe na ihe mepere emepe, ụfọdụ dị ka ndị na-akwado ya, ndị ọzọ dị ka arụkwaghịm na ihe ga-eme ma ọ bụ na enweghị ha. N'ikpeazụ uru bụ ihe ịga nke ọma ahụmahụ; Ya mere, na ala nke geospatial na na-aga n'ihu na Cadastre akara, anyị etinyela ikpe nke ihe ịga nke ọma na nchịkwa ala.
Ọzọkwa, akwụkwọ akụkọ ahụ ejirila vidiyo agbakwunyere na njikọta njikọta, nwere ozi sitere na Airbus (COD3D), Esri na mmekorita ya na Mobileye, Hexagon (Luciad 2019 na M.App) na Trimble na ọrụ ọrụ ya.
N’idebe nkwa anyị iji nye gị akụkọ ndị na-atọ ụtọ na ụdị Geo-injin, anyị nwere obi ụtọ iwetara gị mbipụta nke abụọ nke Geo-Injinia nke Spanish na TwinGeo maka ịsụ Bekee.
Gụọ TwinGeo - n’asụsụ Bekee
Gụọ Geo-Injinịa - Na Spanish
Previous Post«Previous Afọ ọzọ, akara ngosi ọzọ, ahụmahụ ọzọ pụrụ iche… Nke ahụ bụ YII2019 maka m!
Next Post 15th International gvSIG Conference - ụbọchị 1Next »